ary maneho ny fahavononany hiatrika ny faha-30 taonany hibanjinany ny fampandrosoana an`i Madagasikara raha mbola 24 taona izy amin`izao. Mikasa hanao fihaonam-be nasionaly amin`ny 24 janoary izao ho mariky ny fijoroany izy ireo. Ny antoko AVI miatrika ny faha-30 taonany no lohahevitra amin`ny fihaonam-be nasionaly hatao etsy Anosy. Hiatrika ny fampandrosoana ny antoko miaraka amin’ireo olom-boafidiny. Marihana fa nahazo ben`ny tanàna maherin`ny 80 sy mpanolotsaina 230 ny AVI tamin`ny fifidianana farany teo. Tsy niova ny foto-kevitra fa fitondrana tsara tantana, fanjakana tan-dalàna, fanajana ny zon`olombelona. Tsara ny manarika fa ny AVI dia ao anatin`ny vondrona politika ARMADA. Rehefa miteny AVI anefa dia Ingahy Ratsirahonana Norbert Lala no ao an-tsaina. Efa namory ny antokony izy tamin`ity fiandohan`ny taona ity. Mihamafana ny raharaha politika ary maro ny resaka mandeha amin’izao. Raha vao nipoitra ingahy Ratsirahonana Norbert Lala dia lasa ny eritreritra fa hisy fanonganam-panjakana ve eto ? Izy rahateo tsy mba mipoitra firy hatramin’izay raha tsy hanongam-panjakana. Ho hitan-tsika eto indray ny tohin’ity raharaha ity.